Tantaran'ny indostrian'ny sakafom-biby | Alika Manerantany
Tantaran'ny indostrian'ny sakafon'ny biby
Androany aho dia hiatrika lohahevitra mafana, farafaharatsiny raha ny hevitro. Ny niandohana sy ny tantaran'ny indostrian'ny sakafo alikaAry koa ny rafi-pamokarany, ny toerana ahazoan'izy ireo ireo akora tsotra ireo na ny antony maha-sarobidy ny sakafon'ny alika, dia tokony ho fanontaniana apetratsika amin'ny tenantsika raha tena te hanana fahasalamana ny alikantsika.
Araka ny efa nolazaiko tamin'ny tranga hafa, raha mino ilay andian-teny hoe "Izahay no mihinana",Inona ny alikanay raha mihinana 20 na 20 kilao ny marika fotsy misy azy?. Rehefa liana amin'ilay lohahevitra aho dia manomboka mangovitra. Inona no namelomako ny namako akaiky indrindra? ... ary tsy nahafaly ny valiny ...
Avelako fotsiny ianao miaraka amin'ity fohy ity Tantaran'ny indostrian'ny sakafon'ny biby. Tano mafy ny seza izay ny fiankinan-doha, ho tsara izany.
1 Ny niandohan'ny indostria.
1.1 Ny marika fihinan'ny alika voalohany
1.2 Sakafo feno
1.3 Ankehitriny dia Premium ny zava-drehetra
2 Ary manao ahoana ny indostria ankehitriny Antonio?
2.1 Mpanamboatra vokatra
3 Ny fomba fahandro mazika.
3.1 Additives indostrialy na ahoana ny fanapoizinana tsikelikely ny alikanao
4.1 Holazaiko aminao mazava tsara indray: Heveriko = Poizina
Ny niandohan'ny indostria.
Ny marika fihinan'ny alika voalohany
Misy fahasamihafana lehibe tokoa, eo amin'ny heverintsika fa ny indostrian'ny sakafo alika sy ny tena izy, tsy lazaina intsony, ny fisolokiana goavana aterak'izany ho an'ny mpanjifa, izay mino fa mividy sakafo voalanjalanja sy mahavelona mifanaraka amin'ny filan'ny ny filan'ny bibinao, ny tena mividy, loharanom-olana tsy mety ritra ho azy sy ny alikany.
Tamin'ny 1860, ny sakafo voalohany natao manokana ho an'ny alika noforonin'ny elektrisianina amerikanina, James spratt izay nanamboatra ny "mofom-alika" - vita tamin'ny varimbazaha, legioma ary ra ra. Nisy orinasa hafa nanaraka ary sakafo alika voaendy amin'ny serealy Niditra tao amin'ny tsenan-tsakafon'ny biby fiompy izy ireo, izay nanjakan'ny mpivaro-kena taloha.
Nandritra ireo folo taona voalohany nisian'ny vokatra dia efa tadiavina ny tombom-barotra faran'izay betsaka (toy ny amin'ny orinasa rehetra) ary hitan'ny mpanamboatra fa mora vidy sy mora kokoa ny mitahiry sakafo mifototra amin'ny voamadinika sy serealy. Izany dia miteraka fanovana ny karazan-tsakafo nifotoran'ny sakafon'ilay biby, avy amin'izay tena ilainy, amina fenitra indostrialy iray voamariky ny fitadiavana ny tombony farany azo araraotina amin'ny vidin-javatra rehetra, na dia ny famitahana ny mpanjifa aza.
Tamin'ny taona 30 dia nampahafantarina ny sakafo alika maina, niaraka tamin'ny sakafo henan'ilay orinasa Sheaths
Orinasa misakafo. Ho an'ny orinasa toa Nabisco, Quaker Oats ary Sakafo ankapobeny, ny tsenan'ny sakafon'ny biby fiompy vao misondrotra dia nanolotra fotoana iray hivarotana vokatra tsy misy ilana azy ho toy ny loharanom-bola azo antoka. Izany hoe izay rehetra tsy maintsy narian'izy ireo taloha satria tsy azony natao ny mivarotra izany amin'ny fomba rehetra, dia tombony azo izao.
Namidy tamin'ny tombony lehibe azo amin'ny tsy fahafahanao mahandro sakafo ho an'ny biby, ny serealy dia nampidirina am-panaovana ny sakafo ho an'ny baolina, Namorona vokatra tamina daty famaranana lava be izy ireo, ary koa nanome loharanon-kery mora tamin'ny alàlan'ny gliosida, na dia mifanohitra tanteraka amin'ny filàn'ny alikan'ny proteinina biby sy ny anzima velona aza ny sakafo marina.
Tamin'ny 1960, nanambara ireo mpanamboatra sakafo fa nanolotra kalitao tsara ny vokatr'izy ireo satria nampiasain'izy ireo vokatra voamadinika sy hena izay tsy mendrika hohanin'ny olombelona, izay tsy misy dikany firy. Na dia fantatr'izy ireo aza fa hena sy legioma vaovao dia sakafo tena tsara, Nanamafy ny mpanamboatra sakafo fa ny saka sy ny alika dia azo omena sakafo mora amin'ny vokatra fako ao amin'ny orinasa ary mbola salama ihany. Ireo mpandraharaha fikosoham-bary dia nanohy nanana tsena tsara ho an'ny vokariny varimbazaha, raha ireo trano famonoana omby kosa dia nahita tsena ho an'ny vokatra nofon-kena tsy misy ilana azy ary faly toy izany ny rehetra. Afa-tsy ianao sy ny alikanao mazava ho azy.
Tamin'ny taona 70 adala, ny fahamoran'ny sakafo alika fonosana no zavatra voalohany amidy amin'ny besinimaro.
Haingam-pandeha kokoa ny sakafo, ary madio ara-pahasalamana noho ny mametraka anao mahandro, ary manadio ny loto rehetra amin'ny famahanana ny alika sakafo nandrahoin'ny tompony.
Orinasa misakafo biby Izy ireo no namorona ny mari-pamantarana Full Food, izay nilazan'izy ireo tamin'ny mpanjifa fa ity sakafo ity dia nitondra izay nilainy rehetra ho an'ny alikany, ary nanomboka nandefa hafatra izy ireo fa mampidi-doza sy manimba azy ireo ny sakafo alika an-trano, ankoatry ny lafo kokoa. Amin'ny feed dia tsy ilaina ny manome zavatra hafa, tsy misy famenon-tsakafo na fihinanana vitamina na zavatra hafa toa izany. Ny sakafo no tsara indrindra, ny aretin-koditra.
Carlos Alberto Gutierrez mpitsabo kaninina sy mpitsabo biby, Lazainy amintsika ny momba ireo sakafo manokana amidy manokana amin'ny mpitsabo biby, ao amin'ny bokiny "Ny fahamarinana mahavariana amin'ny sakafo saka".
Sakafo manokana namboarina ho an'ny aretina na olana manokana amin'ny biby fiompy dia ampidirina - ny sakafo manokana dia (ary mbola) imbetsaka kokoa noho ny sakafo mitovy amin'ny fonosana hafa.
Ny fampidirana sakafo manokana dia naminavina ny sakafo ara-biby ho an'ny biby ho sarotra, ary nampiseho tamim-pitandremana tamin'ny olona fa tokony hanaraka ny torohevitry ny mpitsabo azy izy ireo fa tsy ny fahaiza-misaina. Ny fividianana sakafo alika dia nitarina hatramin'ny fivarotana lehibe ka hatrany amin'ny tobim-pahasalamana veterinary.
Misy mpiara-miasa ilaina amin'ny fahazoana vina amin'ny fanaovana zavatra mety rehefa mividy pellets ho an'ny alikantsika ahoana ny sakafo ny veterinera. Nolazain'izy ireo taminao fa ny zavatra mahasalama indrindra ho an'ny alika dia ny sakafo ary raisinao ho azy io satria ny mpitsabo anao no milaza aminao. Miala tsiny aminao aho milaza aminao fa tsy toa izany. Ny mpitsabo biby dia tsy zarina ho mpihinana sakafo kaninina, toy ny Oseopata, tsy mila mahafantatra hoe inona no sakafo mahasalama indrindra ho an'ny olombelona. Tsy hanana eritreritra afa-tsy ianao.
Rehefa mamahana ny alikantsika isika dia raisinay ho azy fa ny sakafontsika dia mety ho azy ireo koa, ary mitovy izany mitranga ny mpitsabo biby iray izay tsy mpihinan-kanina kaninina.
Etsy ankilany, rehefa mihaona mpitsabo biby aho ary amidiny am-pitiavana ny fahambonian'ny sakafom-biby, ny fomba hanalavirany ny ain'ilay alika, ny famahanana azy amin'ny fomba voalanjalanja, sns, sns, dia manontany azy ireo foana aho:
Raha mahasalama tokoa izany, maninona no tsy mihinana ny sakafonao?
Ny valin'io fanontaniana io dia matetika fahanginana.
Ankehitriny dia Premium ny zava-drehetra
Tamin'ny taona 80, namidy ho sakafo mahavelona bebe kokoa ary manome raikipohy samihafa ho an'ny dingana rehetra amin'ny fiainana, ny ankamaroan'ny sakafo "premium" dia mbola nampiasa ny fenitra taloha - voa betsaka, gliosida avo, hena ambany ary proteinina ambany.
Tamin'ny taona 90 dia nanomboka nipoitra ny fampahalalana momba ny fahana sy ny angano mainty momba izany. Tamin'ny fotoana nanombohan'ny olona nahafantatra bebe kokoa ny zavatra nohaniny sy ny maha-zava-dehibe izany amin'ny fiainany dia lasa liana tamin'ny sakafon'ny alikany izy ireo. Izany dia nahatonga ny sakafo antsoina hoe "Whole Grains", ary nanomboka nampiroborobo ireo singa manokana ny mpamokatra (toy ny serealy biolojika) fa mety kokoa amin'ny olona izy ireo noho ny fikolokoloana ny alikany. Ary saika ny sakafo "manontolo" dia mbola nifototra tamin'ny voamadinika sy gliosida, ary izy ireo dia tsy nisy afa-tsy fenoRaha ny fahitana alika na saka dia nivoaka nankany an-tsena sy fivarotana biby fiompy izy ireo tamin'ny fahafaham-po fa izy no tsara indrindra ho an'ny biby. Fitaka tanteraka.
Ary manao ahoana ny indostria ankehitriny Antonio?
Eny, mitohy hatrany ny zavatra mitovy amin'ny tamin'ny fiandohan'ny taonjato, satria na dia mivoatra aza ny tsenan'ny alika, ny sakafon'ny biby fiompy dia mbola vita avy amin'ny akora efa voadoka loatra. Ny ankamaroan'ny sakafo mahazatra an'ny biby fiompy ankehitriny dia mbola misy voamadinika maherin'ny 50% ary karibômatida saika betsaka. Salama kokoa ve ny sakafo anio noho ny taloha? Azontsika atao ny milaza fa tsy miova izany, fa miaraka amin'ny marketing bebe kokoa eo an-tampony.
Araka ny White Paper an'ny marika Sakafo Tompondaka:
Na dia mianatra bebe kokoa aza ny mpanjifa ankehitriny ary mahalala bebe kokoa ny votoatin'ny sakafo avy ny biby fiompinao - ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahalala ny fepetra ilaina amin'ny kalitaon'ny sakafo toy ny habetsan'ny gliosida amin'ny sakafom-biby, ary tsy mahalala ny fomba hamaritana ny kalitaon'ny proteinina na tavy. Ny voa dia heverina ho mahasalama ho an'ny olombelona, ​​ary ny sakafon'ny biby fiompy maina dia avy amin'ny voa foana - antony roa lehibe mahatonga ny mpanjifa manaiky ny serealy ho toy ny sakafon'ny biby fiompy. Ny serealy dia teo foana, ka tsy anontaniana matetika izy ireo.
Rehefa anontaniana ianao raha mifanaraka amin'ny alikany sy ny saka ny serealy sy ny gliosida, dia hitan'ny ankamaroan'ny mpanjifa fa tsy anisan'ny sakafom-boanjo na henan-kisoa voajanahary izy ireo. Na eo aza ny fandrosoan'ny tsenan'ny dokotera ary ny "sakafo feno" dia tsy niova firy ny sakafo tao anatin'ny 40 taona lasa. Ny sakafon'ny biby mahazatra dia mbola ataon'ireo orinasa mitovy ihany ary mbola ambany proteinina, be gliosida ary ampiakarina amin'ny isan-jaton'ny voam-bary (marina indrindra izany ho an'ny sakafo mpitsabo biby). Araka ny nasehon'ny tantara, ireo mpanamboatra sakafo ho an'ny biby fiompy dia hamokatra sakafo noforonina voalohany indrindra amin'ny fisehoany ao an-tsaina ny mpanjifa. Amin'ny ankapobeny dia amin'ny vidiny ambany indrindra sy amin'ny mora indrindra no ahazoana azy io, fa tsy amin'ny fanaovana sakafo mety kokoa ho an'ny alika sy saka.
Noho izany, manohy ny mitovy na ratsy kokoa noho ny tamin'ny fiandohan'ny taonjato isika, miaraka amin'ny sakafo ho an'ny biby fiompintsika mifototra amin'ny voamadinika sy vokatra azo avy amin'ny indostrian'ny sakafon'olombelona, ​​miaraka amin'ny gliosida avo lenta ary ny proteinina matavy sy biby ambany. Izany dia nanampy ny kalitaon'ny akora ambany ahazoana azy ireo, ataovy izay hahatonga ny lanjan-tsakafo ho an'ny alika (sy saka), tsy tokony hoentina amin'ny fomba fijery ara-tsakafo ho an'ny biby fiompintsika, satria hiteraka olana bebe kokoa noho ny zavatra hafa. Tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia miresaka momba an'io lohahevitra io aho, ao amin'ny Alika sy adin-tsakafo.
Ny olana tena mampivadi-po dia ny tsy fahampian'ny sakafo ara-indostrialy amidin'izy ireo amintsika, amin'ny lafiny rehetra, na tsy fantatray fa mivarotra aminay izy ireo. Ny fanontaniana tena manandanja araka ny hevitro dia ny fomba hamitahan'izy ireo antsika, amin'ny maha-orinasa misahana ny sakafo amin'ny sehatry ny biby, manitsakitsaka tsy tapaka ny fifandraisana misy eo amin'ny mpamokatra sy ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra momba ny marketing izay mampiasa fihetsem-po hamehezana kitapo zavatra iray izay tokony mahavelona ny alikanay, satria io no apetraka ao anaty fonosana, hatramin'ny 93 eu ny 15 kilao ary na izany aza. Tsy zavatra hafa miresaka ara-tsakafo izany, loharanom-pahalalana tsy manam-paharoa ho an'ny fahasalaman'ny biby.
Ary rehefa nolazaiko anao ny fomba, dia holazaiko aminao hoe iza.
Rehefa mijery kaontenera sakafo alika isika, dia hitantsika amin'ny sary misy hena madio sy mena, legioma vaovao, voam-bary na varimbazaha, akoho ... tadidiko ny nanontaniako ny tenako tamin'izaho mbola kely rehefa nijery ilay fahanana: Ary ahoana no nahatonga an'io steak io Tao amin'ity shit ity izay tsy misy fofona hena na akoho na zavatra fihinana lavitra?
Ireo sary ireo dia manazava tsara izay tian'ny mpanamboatra sakafon'ny alika heverinay fa ny sakafon'alika antsika rehefa manome azy ireo ny vokany. Ny haino aman-jery, tamin'ny alàlan'ny fanentanana ara-barotra tsara tantana, feno dokambarotra alika falifaly mandehandeha rehefa misidina eny amin'ny habakabaka ny sakafo, dia ireo no nampiorina ao amintsika ny hevitra fa ny zavatra tsara indrindra ho an'ny alikantsika dia ny manome azy ireo izay heveriko fa . Ary izany no sary izay tian'ny mpanamboatra sakafo hanome anao sy inoanao.
Araka an'i Eva Martin avy amin'ny pejy Canine Food.com:
Ny tsy fantatry ny ankamaroan'ny mpanjifa dia ny indostrian'ny sakafon'ny biby fiompy dia fanitarana ny faritry ny sakafo olombelona sy ny indostrian'ny fambolena. Ny sakafom-biby dia fomba iray mety hanalana ny sisin-tranon'ny famonoana omby, voan-javatra heverina fa "tsy mendrika hohanin'ny olombelona", ary ireo vokatra fako mitovy amin'izany izay mivadika ho tombony. Anisan'ireo fako ireo ny tsinainy, ny tatatra, ny loha, ny hoho, ary ny ampahany amin'ireo biby mety voan'ny aretina sy homamiadana.
Fa iza ireo antsantsa lehibe amin'ity orinasa ity? Iza no mpamokatra ny sakafon'ny alikantsika? ... tazomy, ho avy ny fiolahana ...
Mitodika any amin'i Eva Martin aho avy amin'ny pejy Alimentacion Canina.com, izay anoratany lahatsoratra be dia be ao ilay lohahevitra antsoina hoe Sakafo ara-pahasalamana ho an'ny biby fiompinay?. Ato amin'ity lahatsoratra ity no amaliany hoe iza ny endrik'ilay indostria:
Ny tsenan-tsakafo ho an'ny biby fiompy dia nanjakan'ny taona maro lasa izay tamin'ny alàlan'ny fakana orinasa lehibe na dia orinasa lehibe kokoa aza. Miaraka amin'ny 15 miliara dolara isan-taona any Etazonia ary manitatra haingana ny tsena any ivelany, tsy mahagaga raha noana ny sasany amin'ny pie lehibe kokoa.
Nestle Purina efa nividy hamorona Nestle Purina Petcare,orinasa sasany toa (Fetibe mahafinaritra, Alpo, Friskies, Chow Alika mahery, sakafon'ny saka, alika alika, alika saka, Beneful, Uno, PROPLAN, sakafo matsiro, HiPro, Kit'n'Kaboodle, Tender Vittles, Purina Veterinary Diet).
Del Monte dia nanala an'i Heinz (MeowMix, Gravy Train, Kibbles 'n Bits, Wagwells, 9Lives, Cycle, Skippy, Recipe natiora, ary ny biby mikarakara ny Milk Bone, Pup-Peroni, Snausages, Pounce).
MasterFoods dia manana ny Mars, Inc., izay nandanyCANIN ROYAL(Sianaka, Waltham's, Cesar, Sheba, Fakam-panahy, Recipe Goodlife, Safidy mety, Excel) ...
Ny mpanamboatra lehibe ny sakafon'ny biby fiompy dia tsy dia fantatra amin'ny tsenan'ny biby, na dia maro amin'ireo vokatra fikarakarany manokana aza no mampiasa akora azo avy amin'ny biby by-vokatra:
Colgate-Palmolive nividy novidina Sakafo ara-tsiansa ao amin'ny Hill (natsangana tamin'ny 1939) tamin'ny 1976 (Sakafo ara-tsiansa ao Hill, Sakafo prescription, tsara indrindra amin'ny natiora).
Orinasa tsy miankina sasany (izay manao sakafo ho an'ny marika hafa toy ny Kroger y Wal-Mart) ary ny mpiara-miasa (izay mamokatra sakafo ho an'ny mpanamboatra sakafom-biby hafa) dia mpilalao lehibe ihany koa. Orinasa lehibe telo no Doane Petcare,Diamondra ary sakafo Sakafo, izay mamokatra sakafo ho an'ny marika am-polony.
Orinasa sakafo lehibe biby fiompy lehibe any Etazonia Izy ireo dia sampana orinasa lehibe goavambe. Raha ny fahitana azy eo amin'ny sehatry ny asa, ny sakafon-biby dia mifanaraka tsara amin'ireo orinasa mamokatra vokatra olombelona. Ny indostrialy dia nampitombo ny fahefany mividy, ireo izay manamboatra vokatra ara-tsakafo hohanin'ny olombelona dia manana tsena babo izay ahazoana mividy ny vokatra fako, ary ny fizarana sakafo ho an'ny biby fiompy dia manana renivohitra azo antoka ary amin'ny tranga maro dia loharano mety fangaro.
Ny Pet Food Institute - fikambanan'ny mpivarotra sakafom-biby, dia nanaiky ny fampiasana vokatra an-tsokosoko amin'ny sakafom-biby ho fidiram-bola fanampiny ho an'ireo mpanodina sy mpamokatra: ny biby fiompin'izy ireo, saingy namorona tsena vaovao mahasoa ho an'ny vokatra fambolena amerikana sy vokatra azo avy amin'ny kitapom-borona, akoho amam-borona ary indostrialy sakafo hafa izay manamboatra sakafo hohanin'ny olombelona.
Ny iray amin'ireo angon-drakitra tokony ho raisina ihany koa dia ny fari-pahadiovana ambany manodidina ny fenitry ny indostria. Izany dia miteraka fandotoana iray manontolo na andalana vokatra iray manontolo. ny FDA (Fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina amerikana) Mamoaka lisitra iray ao amin'ny tranonkalany aho miaraka amin'ireo marika rehetra nisintona tamin'ny fanjifana satria atahorana ho an'ny fihinanana ny bibinay (Fahatsiarovana & fisintonana 05/04/2015). Raha mijery ny lisitra ianao, Ny antony manala ireo vokatra ireo dia mazàna noho ny fahalotoan'ny bakteria na ny fampidirana ireo karazan-javatra rehetra, avy amin'ireo singa metaly toa ny vy na varahina ka hatramin'ny fitaovana tsy fantatra. Eny tompoko. Izay vao novakianao. Ny fisian'ny fitaovana tsy fantatra ho an'ny maso ivoho mifehy. Toa mafy be tamiko izany, tsy fantatro ny momba anao.
Eva Martin dia nitantara tamintsika tao amin'ny lahatsorany momba ny fihinanam-bilona kaninina ao amin'ny pejiny:
Ny ankamaroan'ny sakafo maina dia vita amin'ny masinina antsoina hoe extruder. Voalohany, mifangaro ireo fitaovana arakaraka ny fomba fahandro noforonina niaraka tamin'ny alàlan'ny fandaharan'asan'ny solosaina izay manome ny atin'ny otrikaina isaky ny akora ilaina. Ohatra, ny lafarinina gluten mais dia manana proteinina betsaka kokoa noho ny lafarinina varimbazaha. Satria ny mpitrandraka dia mila ny starch sy ny hamandoana mitovy aminy mba hiasa tsara, ny akora maina - toy ny sakafo hena sy ny taolana, ny lafarinina ary ny voam-bary.
Ny masobe dia ampidirina ao anaty vilanin'ny extruder. Izy io dia iharan'ny setroka sy ny fanerena avo lenta, satria atosika amin'ny alàlan'ny maty izay mamaritra ny endrik'ilay vokatra farany, toy ny lozisialy ampiasaina amin'ny fandokoana mofomamy. Rehefa mivoaka ny hafanana, ny koba misy tsindry avy amin'ny extruder dia tapaka amin'ny antsy fihodinana haingana ho faribolana kely. Rehefa mahatratra ny tsindry ataon'ny rivotra ara-dalàna ny masaka dia manitatra ary mivadika ho endrika farany. Avela ho maina ny sakafo, ary avy eo dia hafafiny amin'ny tavy, na fitambarana hafa mba hahafinaritra azy. Rehefa mangatsiaka dia azo afangaro.
Na dia mamono ny bakteria amin'ny akora aza ny fizotran-tsakafo, ny vokatra farany dia afaka mandray bakteria bebe kokoa mandritra ny fizotra fanamainana, fonosana ary fonosana manaraka. Mampitandrina ny manam-pahaizana sasany fa ny fahazoana lena ny sakafo maina dia ahafahan'ny bakteria ambonimbony hihamaro sy hahatonga ny biby harary. Aza afangaro amin'ny rano, ronono, sakafo am-bifotsy na ranon-javatra hafa ny sakafo maina.
Amin'ny ankapobeny, tsy manontany tena akory izahay hoe avy aiza ny sakafon'ny alikanao, na ny fomba fanaovan'izy ireo sakafo.
Na izany aza…Efa mba nanontany tena ve ianao ny amin'ny fomba anaovany ny sakafon'ny alika?
Ny fomba fahandro mazika.
Ankehitriny dia hiresaka momba ny fomba fanamboarana azy sy ny sakafo saka alika aho. Andao aloha hiresaka momba ny akora namboarin'ireto vokatra ireto.
Rehefa lazain'izy ireo aminao fa misy akoho na henan'omby ny sakafon'ny alikao dia samy mieritreritra sombin'akoho na hen'omby tahaka ireo izay fantatsika rehetra. Tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy. Aleo kosa manome ny alika, ny vavany, ny volony ary ny volony. Manontany tena aho hoe: Inona ny sandan'ny sakafo mahavelona ao amin'ireo akoho ireo? Aza mamaly.
Miverina indray amin'ny lahatsoratr'i Eva Martin avy ao amin'ny Alimentacion Canina.com:
Alika sy saka no mpihinana karnavora, ary tsara indrindra amin'ny sakafo mifono hena. Ny proteinina amin'ny sakafo maina (feed) dia avy amin'ny loharano isan-karazany. Rehefa novonoina ny omby, ny kisoa, ny akoho, ny zanak'ondry ary ny biby hafa, dia notapahina avy tao anaty fatana ny hozatra hohanin'ny olombelona, ​​miaraka amin'ireo taova vitsivitsy izay tian'ny olona hihinana, toy ny lela sy ny katsaka.
Na izany aza, manodidina ny 50% ny sakafo rehetra avy amin'ny biby dia tsy ampiasaina amin'ny sakafon'olombelona. Ny sisa tavela amin'ny faty - loha, tongotra, taolana, ra, tsinay, havokavoka, lalan-drà, aty, ligamenta, fikolokoloana tavy, zaza tsy teraka ary amin'ny toerana hafa dia tsy mandany ny olombelona, ​​vokatra hafa izay ampiasaina amin'ny sakafon'ny biby fiompy, ary sakafon'ny biby, dia zezika, menaka manitra indostrialy, savony, vokatra vita amin'ny fingotra ary vokatra hafa. Ireo "faritra hafa" ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe "Vokatra-by". Ny vokatra azo dia ampiasaina amin'ny sakafom-borona sy ny fiompiana, ary koa ny sakafon'ny biby fiompy.
Mora ny manazava ny fizotry ny famokarana fahana:
Voalohany dia raisin'izy ireo ny sisa tavela amin'ny indostrian'ny sakafon'olombelona ary apetrany amin'ny 3000 degre izany mba hataony lafarinina.
Aondrin'izy ireo avy eo mba hanome azy io endrika baolina io.
Farany, mitsabo ny sakafo amin'ny alikaola simika indostrialy izy ireo mba hahafahan'ny alika mihinana azy ireo.
Fonosin'izy ireo ary amidiny aminao araka izay tratra ny vola.
Additives indostrialy na ahoana ny fanapoizinana tsikelikely ny alikanao
Ao amin'ny Alimentacion Canina.com no ilazan'izy ireo amintsika ny momba ny additives:
Betsaka ny zavatra simika ampidirina amin'ny sakafo ara-barotra hanatsarana ny tsirony, ny fitoniana, ny toetrany na ny fisehoan'ny sakafo. Ireo singa ao aminy dia tsy manome lanja ara-tsakafo. Ny additives sasany dia misy emulsifiers hisorohana ny rano sy ny tavy tsy hisaraka, ny antioksidan mba hisorohana ny tavy tsy ho rancid, ary ny loko sy ny tsiro artifisialy mba hahatonga ny vokatra ho manintona kokoa ny mpanjifa ary mankafy ny biby fiompy.
Karazan-tsakafo fanampiny azo avela amin'ny sakafom-biby sy sakafon'ny biby, tsy manisa vitamina sy mineraly. Tsy izy rehetra no tena ampiasaina amin'ny sakafom-biby. Ny Additives dia azo ekena manokana, na mety tafiditra ao amin'ny sokajy "eken'ny besinimaro ho azo antoka" (GRAS).
Additives: Anticaking Agents, Antigelling Agents, Antimicrobial Agents Antioxidants (mety ho voajanahary na mety hanimba) colorant, Condiment, mpitsabo mpanasitrana, agents d'exploitation, emulsifiers, huile essentielle, enhancers aroma
Humectants, Leavening Agents, Lubricants, Palatants, Granulate Agents and Binders, solika avy amin'ny solika maso mifehy ny pH, Preservatives, Condiment, Zava-manitra, Mpiorina, Mpanamamy, firaketana, Mpihinana vy.
Ny sakafon'ny biby fiompy rehetra dia tsy maintsy tandrovina hitazona azy ireo ho vaovao sy manintona an'ireo sakaizantsika. Fitsaboana fitehirizana ny kaninina, noho izany ny sakafo am-bifotsy dia mety mila fanampiana kely na tsy misy fanampiana fanampiny. Ny preservatives sasany dia ampiana amin'ny akora na akora akora avy amin'ny mpamatsy, ary ny sasany kosa afaka ampian'ilay mpanamboatra.. Ny US Coast Guard, ohatra, dia mitaky ny hazandrano amam-boanjo ethoxyquin na antioxidant mitovy.
Satria ny mpanamboatra dia tsy maintsy miantoka fa ny sakafo maina dia manana fiainana talantalana lava (mazàna 12 volana) hihinanan-kanina mandra-pandefasana sy hitehirizana, ny menaka ampiasaina amin'ny sakafon'ny biby fiompy dia voatahiry amin'ny preservatives synthetic na "voajanahary". Anisan'izany ny preservatives synthetic butylhydroxyanisole (BHA) sy butylhydroxytoluene (BHT), propyl gallate, propylene glycol (ampiasaina ihany koa ho toy ny kinova tsy misy poizina an'ny antifreeze fiara), sy ethoxyquin. Ho an'ireo antioxidant ireo dia tsy misy fampahalalana firaketana momba ny poizina, ny fiarovana azy ireo, ny fifandraisany, na ny fampiasana tsy tapaka ny sakafon'ny biby fiompy izay azo hanina isan'andro ho an'ny ain'ny biby. Voaràra amin'ny saka saka ny Propylene Glycol satria miteraka tsy fahampian-dra amin'ny saka, fa mbola avela hohanin'ny alika.
Ireo mpiasan'ny homamiadana mety hitranga, toy ny BHA, BHT, ary ethoxyquin dia avela amin'ny ambaratonga ambany. Ny fampiasana ireo akora simika ireo amin'ny sakafon'ny biby dia tsy nodinihina lalina, ary ny fananganana maharitra an'ireo agents ireo dia mety hanimba. Noho ny angona mampiahiahy ao amin'ny fandinihana tany am-boalohany momba ny fiarovana azy, ny mpanamboatra ny Ethoxyquin, Monsanto, ilaina ny fandinihana vaovao sy henjana kokoa. Tapitra tamin'ny taona 1996. Na dia tsy nahita poizina lehibe mifandraika amin'ny "vokatra azy manokana" aza i Monsanto tamin'ny Jolay 1997, ny Center of Medicine for Veterinary an'ny FDA dia nangataka ny hampihenan'ireo mpanamboatra an-tsitrapo ny antsasaky ny ethoxyquin avo indrindra hatramin'ny 75, isaky ny tapitrisa. Na dia misy aza ny mpitsikera sy mpitsabo biby an'olona sasany dia mino fa ny ethoxyquin dia antony lehibe mahatonga ny aretina, ny olan'ny hoditra ary ny tsy fiterahana amin'ny alika, ny sasany kosa milaza fa io no fiarovana azo antoka indrindra, matanjaka indrindra ary miorina amin'ny sakafo biby.. Ethoxyquin dia ekena hampiasaina amin'ny sakafon'olombelona ho fitehirizana ny zava-manitra, toy ny cayenne sy ny sakay, miaraka amin'ny haavo 100 ppm - saingy ho sarotra be ho an'ireo mpitia zava-manitra indrindra ny handany vovo-sakay betsaka mandritra ny andro toa ny alika mihinana sakafo maina isan'andro. Ethoxyquin Mbola tsy notsapaina ho an'ny fiarovana ny saka io. Na eo aza izany dia matetika ampiasaina amin'ny sakafom-biby ho an'ny alika sy saka.
Mpanamboatra sakafo biby fiompy maro no namaly ny ahiahin'ireo mpanjifa, ary ankehitriny dia mampiasa «preservatives« voajanahary »toy ny vitamina C (ascorbate), vitamina E (mifangaro tocopherols), y menaka rosemary, jirofo, na zava-manitra hafa, hitehirizana ny tavy amin'ny vokatrao. Fohy kokoa anefa ny fiainana talantalana - 6 volana eo ho eo monja.
Ny akora isam-batan'olona, ​​toy ny hazandrano, dia mety asiana preservatives alohan'ny hahatongavany amin'ny mpamokatra sakafon'ny biby fiompy. Ny lalàna federaly dia mitaky ny hamoahana ireo mpiaro tavy amin'ny marika, na eo aza izany ny orinasan-tsakafo biby dia tsy manaraka an'io lalàna io foana. (azo atao ny mitahiry azy Ethoxyquin raha tsy hita taratra amin'ireo akora ao amin'ilay vokatra izy io, satria ampidirin'ny mpamatsy ny lafarinina fa tsy ny ozin-tsakafo.)
Holazaiko aminao mazava tsara indray: Heveriko = Poizina
Isaky ny mahita ny iray amin'ireo lahatsoratra ireo aho, aiza Nolazain'izy ireo taminay ny tombotsoan'ny famahanana ataon'ireo mpanao gazety pseudo antonony izay manolo-tena amin'ny fakana tahaka ny lahatsoratra hitan'izy ireo avy amin'ny mpanao gazety pseudo hafa, toy ny boloky izy ireo, tsapako fa tsy fantatr'izy ireo ny fahavoazana ataon'izy ireo amin'ny fiarahamonina sy ny biby miaraka amin'ireo fanaony matihanina mampalahelo. Eo anelanelan'izy ireo sy ny mpitsabo biby, izay tsy tokony hanana ny fivarotana fahana amin'ny asany maha-matihanina azy ireo, dia namorona sary manodidina ilay sakafo izy ireo, izay indrindra no tadiavin'ny marika famahanana alika.Hoy i Purina, Hill's na Royal Canin.
Isaky ny manontany olona aho hoe inona no nohanin'ny alikany, ary lazain'izy ireo amiko fa tsara ny hevitro, ary avy eo lazainy amiko ny marika fivarotana lehibe. Manome lanja ny halehiben'ny fitaka ampanaoviny anay aho.
Miarahaba ary ny zavatra manaraka entiko ho anao dia a torolàlana famahanana canine.
Karakarao ny alikanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Tantaran'ny indostrian'ny sakafon'ny biby
ary .. inona no omentsika azy ireo hohaniny? raha tsindrio ny feed?
Mamaly an'i ana
Omeko ny saka nohaniko avy amin'ny marika Orijen, izay tsy dia lafo loatra ary mameno azy amin'ny sakafo lena avy amin'ny Almo Nature na Applaws izay, rehefa nosokafana dia toa sakafo natokana ho an'ny olombelona. Ahoana ny hevitrao momba an'io sakafo io?
Salama Juanjo. Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra. Orijen dia marika famahanana tena tsara, izay manana kalitao avo lenta tokoa ny fizotran'ny vokatra, ary toa tsy ampy izany, dia tso-po izy ireo. Champion Foods dia mpamokatra fahana izay manova tsikelikely ny tsenan'ny sakafo ho an'ny bibintsika. Namoaka boky Orijen White Book izy ireo, izay fototry ny fandalinana maro momba ny famahanana marina ny biby fiompintsika, ary izy ireo ihany no manome tolo-kevitra sakafo mahasalama izay misy vokatra voajanahary.
Josemari dia hoy izy:
Mihinana ambiny, aty, ati-doha, katsaka, ati-doha ihany koa aho sns. Fantatsika fa mihinana amboarina amin'ny flakes an'ny puree, maina, am-bifotsy sns isika. Inona no tsy maintsy ataontsika ?. Mosarena? Tsara ny manao tatitra, mba hananantsika kalitao, ho antsika sy ny mpiasa an-trano, fa maninona no tsy omena ireo vaovao manorina? Misy korontana sisa tavela ho antsika? Fa maninona ireo lahatsoratra ireo no tsy manome vahaolana velively? Ilaina ny mieritreritra.
Valiny tamin'i Josemari
Heveriko-Online.com dia hoy izy:
Mijanona eo amin'ilay lahatsoratra foana aho. Miaraka amin'ny endrika manao ahoana hoy ianao fa heveriko fa poizina? Amin'ny ampahany: 1. Raha eny dia tsy eny an-tsena izany. 2. Ny marika rehetra dia manana ny endriny feno amin'ny antsipiriany ao anaty fonosana fahana, any dia afaka misafidy izay tiany omena ny biby fiompiny ny tsirairay. 3. Ny fahana avo lenta rehetra dia natao mba hanomezana ny biby fiompy ny tsara indrindra, ny otrikaina rehetra ilainy, ny fifandanjana ara-tsakafo azonao lazaina. Miankina amin'ny lahatsoratra bebe kokoa fotsiny ianao ary tsy mety ny lazainao.
Acana sy Orijen ohatra no tsara indrindra eny an-tsena, sakafo voajanahary tsy misy additives izy io. Voaporofo fa misy vokatra tsara, indrindra ny hoditra sy ny volo. Mitondra proteinina biby 50 ka hatramin'ny 80% izy ireo, rehefa mihetsika eo anelanelan'ny 20-30% ny marika fanta-daza.
Valio aho zavatra: Nahoana no misy vokatra tsara toy izany ny sakafom-biby ho an'ny olana manokana (digestive, kidney, urinary, allergy, tsy fahazakana sakafo sns ...) ary miasa ve izy ireo? Manana ny vahaolana amin'ny fomba hafa ve ianao?
Hitako fa tsy mamaly olona ianao, hitranga izany satria lahatsoratra hafa ihany no ianteheranao ary tsy dia manana hevitra firy ianao. Amin'ny farany, izay tadiavintsika no tsara indrindra ho an'ny biby fiompinay, ary ny sakafo dia manome ny otrikaina rehetra ilain'izy ireo.
Valio amin'i Pienso-Online.com
Salama Kiko85. Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra. Izay rehetra avy amin'ny Champion Foods dia zavatra tsara. Afaka milamina ianao.
Salama Raul. Misy marika toa an'i Acana, Orijen na Fresh! izay manolotra kalitao tena avo lenta amin'ny fizotran'izy ireo. Champion Foods dia mpanamboatra tsara. Tsy hamaky fanehoan-kevitra ratsy avy amin'izy ireo ianao. Mirary ny soa indrindra.
Luçi dia hoy izy:
Salama Sergio, misaotra tamin'ny famaliana. Te hahafantatra aho raha fantatrao ny marika applaws. Azo oharina amin'ny marika sakafo tompon-daka ve izy ireo? Izy io no heveriko fa omeko ny saka tato ho ato satria maimbo izy ireo. Omeko acana ny alikako
Valio i Luci
Famelan-keloka. Nantsoiko ianao hoe Sergio. Te hilaza mazava i Antonio
Salama Luci. Aza matahotra fa zavatra ratsy kokoa no niantsoan'izy ireo ahy. Tsy fantatro izany marika izany, ary tsy dia fantatro loatra ny famahanana saka, na izany aza misy zavatra iray fantatro, ny marika tompon'andraikitra dia manolotra amin'ny famaritan'izy ireo marika ny tena firafitry ny isan-jaton'ny zavatra ao anatiny. Mitadiava fampahalalana ihany koa ao amin'ny Nutricionistadeperros.com, ilay tsara Carlos Alberto Gutierrez, dia mpamatsy saka saka ihany koa. Fiarahabana sy fisaorana noho ny fanehoan-kevitra.
Salama Epona, misaotra anao naneho hevitra ary miala tsiny amin'ny fanemorana ny famaliana anao.
Mandeha amin'ny ampahany izahay.
Moramora kokoa ho anao ny manome sakafo azy ireo raha oharina amin'ny heveriko. Mora toa an'ity.
Akoho iray kilao dia ambany kely noho ny 2 eu ao amin'ny supermarket mahazatra.
Ny iray kilao amin'ny fahana mora indrindra dia mitentina 2 eu.
Ny alika lehibe iray dia tsy maintsy mihinana 1,5% ny lanjany amin'ny sakafo voajanahary, izay tsy maintsy 60% proteinina biby fihinana kely (akoho, papelika, bitro, sns.), Ary ny ambiny vary masaka na legioma 20% ary ny 20% an'ny yaourt hafa. , fromazy, atody nandrahoina mafy ...
Tsy haiko ireo marika ireo, azafady fa tsy afaka manampy anao aho. Na izany aza, tsy hatoky tena tokoa aho.
Matetika tonga any aminao ireo akora ... simia madio ...
Ho an'ireo alika tsy mahomby amin'ny voa dia mamporisika anao aho hijery ny asan'i Dr Donald Strombeck, izay na dia amin'ny teny Anglisy aza, ny bokiny "Alika sy saka alika an-trano voaomana: The Alternative Heathful" dia asa lehibe iray voatondron'izao tontolo izao.
Misaotra amin'ny fiderana !!!
Salama Mirta, misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra.
Ny alikanao mihinana toa mpanjaka !!!
Ampitomboy ny proteinina ho an'ny biby ka tokony ho 60% amin'ny sakafonao isan'andro ary handeha tsara ny zava-drehetra.
Ali dia hoy izy:
Antsoy hoe anjara io, antsoy hoe kisendrasendra na inona no tianao hiantsoana azy ... Hanokatra mpikarakara alika ao San Jerónimo Seville aho, ary nanao ny Mazava ho azy fa miaraka amin'i Carlos Gutierrez izay tiako, ary hitako izao fa misy olona tena akaiky izay manana filozofia mitovy amin'ny sakafo ara-alika. Mamelona ny alika Flamenka mandritra ny roa taona amin'ny sakafo an-trano sy ny taolana aho ary tsara, tsara. Te hanao apôstôly an'i Carlos amin'ny asako aho. Faly be aho fa mahare amin'ny olona iray izay, ankoatry ny maha akaiky ahy sy miasa ao amin'ny guild, dia miaro ny fanajana ny karazana kaninina sy zana-koditra. fiarahabana
Mamaly an'i ali
Misaotra betsaka anao namoaka ity lahatsoratra ity.
Efa ela aho no nanome sakafo ny alikako ny sakafon'ny barf, (ho an'ireo izay tsy mahalala azy dia hena manta, taolana voahodidin'ny hena sy manta, viscera, legioma sy voankazo, atody, trondro, yaorta voajanahary na kefir, sns sns) mazava ho azy fa nangatsiaka aloha hamonoana parasy mety hitranga, ary tsy vitan'ny hoe matanjaka izy, salama kokoa, mailaka sy tsara bika noho ny taloha, fa ny allergie-ny dia anisan'ny lasa, ary ny analytics dia 10.
Ny feed dia scam ary mafia ary tsy tokony ho anisan'izany isika amin'ny fanaovana marary ny alikantsika / saka amin'ny fanomezana sakafo azy ireo.
stolis dia hoy izy:
Jereo, perroflauten, azonao atao ny mandika ny lahatsoratra amerikana tadiavinao ary mahandro kaviara ho an'ny alikanao, fa raha amin'ny andalana faharoa kosa dia milaza ianao fa ny sakafom-biby dia nofidina avy amin'ny sisa tavela amin'ny biby marary, biby izay tsy afaka miditra amin'ny trano famonoana ao amin'ny Vondron Eropeana. ho an'ny lalàna ary izany dia narahina hatramin'ny naha-tratran'ny omby adala, disqualifié ny lahatsoratrao manontolo. koa aza miresaka momba ny fahana tamin'ny taonjato 2 lasa izay, tany Espana dia tsy nisy alika nihinana sakafo alohan'ny 70 ...
Mamaly an'i stolis
LIGIA PARRA OR dia hoy izy:
Salama. Manoratra ho anao avy any Kolombia aho. Te hizara vaovao iray izay avy amin'ny zavatra niainako aho. Nomeko sakafo ny doggies an'i Hills ary maty izy ireo. Izahay dia manome sakafo azy ireo matetika miaraka amin'ny HIlls ary mino ahy fa poizina izany. Ahoana no hinoan'Andriamanitra izany? ny indostria sy ny mpitsabo biby dia mampino antsika fa io no tsara indrindra, saingy tsy mamono azy ireo tsikelikely izahay, mahatsiravina sy maharary ny fahasarotan'izy ireo. Tsy afaka manohy mino ireo indostria ireo izahay na amin'ireo mpitsabo biby izay, mba hahazoana tombony amin'ny fivarotan'izy ireo, dia mifikitra amin'ny masontsika ny sakafo tsara indrindra. Andriamanitra ô. natahotra ny iray tamin'ny alikako rehefa nanova azy ho havoana7 + aho nitady ny tany. Samy miaraka amin'ny gastritis mitaiza, fivontosana, manakantsakana, mangovitra. Aza adino ny mitady fijoroana vavolombelona mihoatra ny miseho.
Valiny amin'i LIGIA PARRA O
Avy any Kolombia aho. Manamarina 100% aho fa poizina i Hills. Maty fotsiny ny alika roa. Mampijaly azy ireo. Ny fahasarotana iray alina dia natambatra ho an'io fifantohana io. Ilay lehibe indrindra dia nanova azy ho amin'ny havoana 7+ ary lasa adala, nitady sakafo tety amin'ny tany, nanova ny fihetsiny ary tsy niverina nanao izay nataony intsony. Vao 15 andro lasa izy no maty. Ary tsy afa-bela ihany koa ilay biby hafa 4 taona. Samy misy gastritis mitaiza, sakana, fahasimban'ny voa. Andriamanitra no mifarana hatreo AZA Omeo ny bibi-bolanao, izay ataon'Andriamanitra; Andao handro ho azy ireo, novonoin'izy ireo isika. Tara loatra amiko, fa avelako anao izao fampianarana maharary izao
mirely dia hoy izy:
Io no ahiahiako hatry ny ela, azoko antoka fa toy izany koa no miseho amin'ny sakafo voahodina ho an'ny olombelona ary koa ny fanafody sy ny maso…. Tsy manana porofo aho fa azoko antoka fa ny aretina rehetra dia miorina amin'ny laboratoara mba hampiharina amin'ny olona. Ny zava-misy dia tsy ny voankazo na legioma no sahaza hohanin'ny olombelona…… Biby mahazatra isika ary toy ny biby tena izy, ny taova-tenanay dia vonona handany izay ho avy.
Mamaly an'i Mirelly
Nandritra ny am-polony taona maro aho no namahana ny biby fiompiko ary efa ela velona daholo izy ireo (15-16 taona eo ho eo) ary nanana fahasalamana sy fahavelomana mandra-pahalehibeny izy ireo. Heveriko fa mihoapampana ilay lahatsoratra ary mandeha amin'ny tsipika "anti-system".
Te hahafanta-javatra momba ny tongotry ny alika
Alika sy adin-tsakafo